Xiisadda GALMUDUG oo ka sii dartay kadib tallaabo ay qaadeen xildhibaanno - Caasimada Online
Home Warar Xiisadda GALMUDUG oo ka sii dartay kadib tallaabo ay qaadeen xildhibaanno
Xiisadda GALMUDUG oo ka sii dartay kadib tallaabo ay qaadeen xildhibaanno
Cadaado (Caasimada Online) – Warar dheeraad ah ayaa waxa uu kasoo baxayaa kulan ay maanta magaalada Dhuusamareeb ku yeesheen Xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Galmudug, oo xiisad xooggan ay ka dhex taagneyd maalmihii dhowaa.
Kulanka oo wakhti qatay ayaa waxaa looga dooday Mooshinka laga keenay Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug.
Xildhibaanada ayaa isla kulanka ku go’aamiyay in maalinta Berri ah codka kalsoonida loo qaado Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug.
Xildhibaanada ayaa sidoo kale isla kulanka Mooshin uga gudbiyay Gudoomiye ku xigeenka Koowaad Baarlamaanka maamulka Galmudug Xareed Cali Xareed.
Xareed Cali Xareed, ayaa waxaa Mooshinka ka gudbiyay Xildhibaano gaaraya ilaa 55 kuwaa oo doonaya in mooshinka Madaxweyne ku xigeenka kadib la qaado kan Gudoomiye ku xigeenka Koowaad Baarlamaanka Xareed.
Xildhibaanada ayaa gudoomiye kuxigeenka Koowaad ee baarlamaanka waxa ay ku eedeeyeen jabinta dastuurka Galmudug, dhawris la’aanta xeer hoosaadka iyo burburinta sharafta golaha baarlamaanka Galmudug.
Sidoo kale, waxaa la dhisay Guddiga doorashadda Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug, Maadaama xilkii horay looga qaaday Gudoomiyihii Baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir.
Si kastaba ha ahaatee, xaalada Galmudug ayaa u muuqaneysa mid kasii dareysa waxaana gudaha asbuucan laga cabsi qabaa in Galmudug ay noqoto madax la’aan.